एक के हो डिजिटल एलईडी पोस्टर?
डिजिटल एलईडी पोस्टरको संक्षिप्त परिचय
यो डिजिटल एलईडी पोस्टरको साथ आधुनिक, वैकल्पिक तरिकामा आफ्नो ब्रान्डको विज्ञापन सन्देशहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्। यो कुरकुरा डिजिटल स्क्रिनले आश्चर्यजनक भिजुअल डिस्प्लेहरू प्ले गर्न सक्षम छ जसले ग्राहकहरू र आगन्तुकहरूलाई तपाईंको व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्दछ। LED डिस्प्लेमा फ्ल्याट प्यानलहरू हुन्छन् जसले उच्च गुणस्तरको छवि र भिडियो प्रदर्शनहरू सिर्जना गर्न पिक्सेलको रूपमा प्रकाश-उत्सर्जक डायोडहरू प्रयोग गर्दछ जुन साना परम्परागत मुद्रित चिन्हहरूको तुलनामा फरक देखिन्छ।
यस स्क्रिनको अल्ट्रा-थिन प्रोफाइल मात्र 45mm छ, यसको मतलब यो तपाइँको व्यवसाय वा घटना भित्र धेरै ठाउँ लिन आवश्यक छैन। स्ट्यान्डअलोन डिस्प्लेको रूपमा एउटा स्क्रिन प्रयोग गर्नुका साथै, तपाईंसँग छवटा स्क्रिन प्यानलहरू सँगै लिङ्क गर्ने र ठूलो कुल स्क्रिन साइजमा तपाईंको छवि वा भिडियो प्रदर्शन गर्ने विकल्प छ। प्यानलहरूको लगभग फ्रेम-कम डिजाइनको अर्थ हो कि तपाईंको उच्च-गुणस्तरको गतिशील छविहरू धेरै स्क्रिनहरूमा निर्बाध रूपमा सार्न सक्षम छन्।
एलईडी पोस्टरहरू प्रयोग गर्दा के फाइदाहरू छन्?
दुबै एलईडी पोस्टर प्रदर्शन र अन्य LED स्क्रिन डिस्प्लेहरू तपाईंको ब्रान्ड सन्देश विस्तार गर्न र आगन्तुकहरूलाई नवीनतम अद्यावधिकहरूको साथ सूचित राख्न गतिशील उपकरणहरू हुन्।
यद्यपि, LED पोस्टर चिन्हहरूले केही विशिष्ट र अत्याधुनिक सुविधाहरू प्रदान गर्दछ जुन अन्य LED डिस्प्लेहरूले गर्दैनन्।
LED पोस्टरहरू फ्रि-स्ट्यान्डिङ डिस्प्लेहरू भएकाले, तिनीहरू सजिलै चल्न सकिने छन्। तपाईंले तिनीहरूलाई कुनै विशेष उपकरण र विशेषज्ञताको आवश्यकता बिना नै एक बिन्दुबाट अर्को बिन्दुमा सार्न सक्नुहुन्छ।
LED पोस्टरहरू निर्मित फोल्ड-आउट फ्रेमसँग आउँछन् जसले प्रदर्शनलाई बलियो समर्थन प्रदान गर्दछ। LED पोस्टरहरू आफैं खडा हुन सक्ने मात्र होइन, तर फल-आउट फ्रेममा प्रयोगमा नभएको बेलामा सावधानीपूर्वक शेल्फलाई हटाउनको लागि सफा रूपमा समावेश गरिएको ग्रूभ पनि हुन्छ।
LED पोस्टर डिस्प्लेहरू तुलनात्मक रूपमा हल्का हुन्छन् जसले तिनीहरूलाई ह्यान्डल गर्न सजिलो बनाउँछ। एउटा LED पोस्टर सेटको औसत वजन 30-40kg बीचमा हुन्छ।
एलईडी पोस्टरहरूको बारेमा अर्को ठूलो कुरा यो हो कि तिनीहरू लचिलोपन प्रस्ताव गर्छन्। तपाइँसँग तपाइँका सबै विज्ञापन र घटना प्रदर्शन आवश्यकताहरू पूरा गर्न धेरै स्थापना विकल्पहरू छन्।
LED पोस्टरले धेरै प्रकार्य बटन र कनेक्टरहरू प्रदान गर्दछ जसले तपाईंलाई चमक नियन्त्रण गर्न र समग्र प्रणाली व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ। यी सुविधाहरूमा Wi-Fi एन्टेना, USB पोर्ट, RJ45 पोर्ट, HDMI आउटपुट, अडियो आउटपुट, पावर एडाप्टर ज्याक, र थप समावेश छन्।
एलईडी पोस्टर प्रदर्शन कसरी काम गर्छ?
LED पोस्टर चिन्हहरू अन्य सबै LED डिस्प्लेहरू जस्तै काम गर्दछ तर अन्य LED डिस्प्लेहरूको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा अधिक प्रयोगकर्ता-अनुकूल छन्। तिनीहरूले उच्च-परिभाषा प्रदर्शन परिणामहरू प्रस्ताव गर्छन् र पिक्सेल प्याच P1.8 देखि P3 सम्म हुन सक्छ।
तपाईंको आवश्यकताहरूको लागि अनुकूलन एलईडी डिजिटल पोस्टरहरू
AVOE एलईडीरचनात्मक एलईडी डिस्प्ले र समाधानहरूमा विशेषज्ञता, जस्तै ट्याक्सी शीर्ष एलईडी डिस्प्ले, डिजिटल एलईडी पोस्टर, लचिलो एलईडी स्क्रिन, सर्कल एलईडी साइन र अनुकूलित एलईडी स्क्रिन र एकीकृत समाधानहरू। यो हाम्रो लागि अनुकूलित समाधान र परियोजनाहरु को लागी एक ठूलो लाभ हो।
LED पोस्टरको लागि मानक आकार 640mm (चौडाइ) र 1920mm (उचाइ) हो। र हामी पनि 768 * 1920mm र 576 * 1920mm साइजको नेतृत्व पोस्टर प्रदान गर्दछौं। यदि तपाइँ फरक आकार चाहनुहुन्छ भने, हामी आकार र रंगहरू सहित प्रयोगकर्ताको प्राथमिकता अनुसार अनुकूलन प्रस्ताव गर्दछौं। कुनै थप प्रश्नहरू, कृपया हामीलाई तुरून्त सम्पर्क गर्नुहोस्।